Annaga nagu saabsan - Hebei Kingflex Insulation Co., Ltd.
Kingflex waxaa aasaasay Kooxda Jinwei oo in ka badan 40 sano taariikhi ah.Kooxda Kingway waxaa la aasaasay 1979. Waxay ahayd soo-saarehii ugu horreeyay ee agabka dahaadhka kulaylka ee waqooyiga wabiga Yangtze.
Shaqaalaheennu waa kuwo la yaab leh naftooda, laakiin wadajir ahaan waxay yihiin waxa Kingflex ka dhigaya meel madadaalo leh oo abaal-marin leh oo laga shaqeeyo.Kooxda Kingflex waa koox isku xidhan, karti leh oo leh aragti la wadaago oo ah in si joogto ah adeeg fasalka koowaad loo siiyo macaamiisheena.Kingflex wuxuu leeyahay sideed injineero xirfadlayaal ah oo ku jira Waaxda R & D, 6 iibka caalamiga ah ee xirfadlayaasha ah, 230 shaqaale ah oo ku jira waaxda wax soo saarka.
Alaabada dahaarka kulaylka ee Kingflex ayaa si weyn loogu isticmaalaa dhismaha, batroolka, kiimikaadka, difaaca qaranka, hawada hawada iyo warshadaha kale.Badeecooyinka Kingflex ayaa loo dhoofiyay in ka badan lixdan iyo lix waddan oo ajnabi ah adduunka oo dhan 16kii sano ee la soo dhaafay.
U soo iibi macaamiisha adduunka oo dhan si buuxda oo ah habka dahaarka badbaadinta tamarta.
Bixiyaha xalka isku dhafan ee dahaarka kulaylka, dahaadhka qabowga iyo dhimista buuqa ee dhismayaasha iyo warshadaha.